Xaflada lagu sagootiyey wasiiru dawlaha xafiiska Raysilwasaaraha JDFI. - Cakaara News
Xaflada lagu sagootiyey wasiiru dawlaha xafiiska Raysilwasaaraha JDFI.
Jigjiga (CN) November,25, 2015, Xafiiska haweenka iyo caruurta DDSI ayaa xaflad sagootin ah u qabtay wasiiru dawlaha wasaarada xafiiska Raysilwasaaraha JDFI marwo farxiya maxamed cumar oo intii ayna qaban xilka wasiiru dawlaha ka shaqayn jirtay xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta DDSI taasi oo muujisay xiligii ay ka shaqayn jirtay xafiiska karti, dadaalo dheeriya iyo ka go’naansho hirgalinta qorshayaasha horumarka.
Xafladan oo ahayd mid si meeqaam sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa furitaankeedii ka hadlay wasiirka xafiiska arimaha haweenka iyo xaruurta DDSI marwo Raxma suldaan maxamuud haybe oo sharax dheer ka bixisay ahmiyada balaadhan ee ay XDSHSI iyo xukuumada DDSI siisay dhinaca ka qaybgalka haweenka oo dhinaca kasta leh haddii ay tahay dhinaca ka qaybgalka golayaasha baarlamaanka heer deegaan iyo heer fadaraal iyo waliba xilalka ugu sareeya ee heer deegaan iyo heer faderaalba.
Waxayna wasiiradu ka warbixisay dadaaladii shaqo ee ay muujisay marwo farxiya wakhtigii ay ka shaqaynaysay xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta DDSI taasi oo kula dar daarantay in ay hadda looga baahan yahay in ay sii laba jirbaarto dadaalkeeda shaqo.
Sidoo kale wasiir ku xigeenka xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta DDSI mudane cabdifataax ahmed gamadiid iyo shaqaalaha xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta DDSI ayaa dhamaantood ka warbixiyay kartida iyo khibrada aqooneed ee ay leedahay marwo fadxiya maxamed cumar wasiiru dawlaha wasaarada xafiiska Raysilwasaaraha JDFI.
Dhankeeda wasiiru dawlaha xafiiska raysil-wasaaraha JDFI marwo farxiya maxamed cumar oo hada muddo 3 bilood ah ka soo shaqaysay xilkii loo igmaday ee xafiiska raysil wasaaraha JDFI oo u soo noqoday xafladan ay ku maamuuseen xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta DDSI ayaa si wayn ugu mahad naqday masuuliyiinta iyo shaqaalaha u diyaariyay xafladan.
Ugu danbayntii wasiirada xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta DDSI ayaa abaalmarin gudoonsiisya wasiiru dawlaha xafiiska raysilwasaaraha JDFI.